Yan Aung: ဘလော့ဂ်တွင် မာတိကာတပ်ခြင်း (၁)
ဒီပို့စ်လေးကို ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ မရေးဖြစ်ဘူး. တစ်ချို့ကသိပြီးသားဆိုတော့ ရေးရမှာ အားနာနေမိတယ်. ဒါပေမယ့်လည်း သိချင်သူတွေ မသိလိုက် ရသေးသူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်.
ဘလော့ဂါမောင်နှမတို့ရဲ့ ပို့စ်လေးတွေကို မာတိကာပုံစံမျိုးလေးနဲ့ တစ်နေရာ တည်းမှာ ပေါ်စေချင်ရင် ခုလိုမျိုးလေးရိုက်ပေးလိုက်ပါ.
ကိုယ်ပေါ်စေချင်တဲ့ပို့စ်တွေက ၁၀၀ ထက် နည်းချင်ရင်တော့ ကိုယ်ကြိုက်သလို နံပါတ်လေးကို ပြောင်းပေးရုံပါပဲ.. Maximum results ကို ပို့စ် ၁၀၀ ထိပဲ ပေးပေါ်စေပါတယ်. Blogger Server က ကန့်သတ်ထားတာပါ. ဒါကြောင့်နည်းလို့တော့ ရပါတယ်. ၁၀၀ ထက်ပိုများလို့တော့ မရပါဘူး.
အဲဒါက ပို့စ်လေးတွေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ပေါ်အောင်လုပ်တာပဲ ရှိပါသေးတယ်. အဲဒီ့ပို့စ်လေးတွေကို List ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတွေပဲ ပေါ်နေအောင် လုပ်ဖို့အတွက်ကျတော့ Template ထဲမှာ အောက်ပါ coding လေးတွေကို ရှာပြီး တစ်ခါတည်း အစားသွင်းပေးလိုက်ပါ.
Edit Template လုပ်ပါ. Template ထဲမှာ main includable စာကြောင်းလေးတွေကို လိုက်ရှာပြီးတာနဲ့ ဒီအောက်က Coding လေးတွေကို အစားထိုးလိုက်ပါ. ဟုတ်ပါတယ်. Main includable တစ်ပိုဒ်လုံးကို အစားထိုးပစ်လိုက်ရမှာပါ.
<!-- onalabel page, addaheader saying 'Contents' -->
<!-- Start loop for displaying posts here -->
<!-- Date-headers are only displayed if on main, item or archive page -->
<!-- If on label-page, then no date-header -->
<!-- Here we start displaying the posts. -->
<!-- If we are onalabel page, only the posttitle is displayed -->
<!-- On other pages the entire post is displayed -->
<!-- If on item page display comments -->
တစ်ခုကောင်းတာက ဒီမာတိကာလေးအတွက် ထည့်ရေးလိုက်တဲ့ Coding လေးတွေဟာ Label လေးတွေကို Click ခေါက်လိုက်ရင်လည်း Title လေးတွေကိုပဲ စုပြီးပေါ်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်. ဖတ်ရှုသူအတွက် အင်မတန်မှကို အဆင်ပြေစေတဲ့ Tool လေး တစ်ခုပါပဲ ခင်ဗျာ..
Label ကို နှိပ်လျှင်မြင်ရမည့်ပုံ
အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားသလို မာတိကာပုံစံလေးတွေ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်မှာ တင်လို့ရပြီပေါ့…
ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ. ကျန်တာကိုတော့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် အဆင်ပြေအောင် ဆက်ပြင်နိုင်ပါတယ်.
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ချောမွေ့နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ…
ဒါက မာတိကာလုပ်နည်း (၁) ပါ. နောက်တစ်နည်းရှိပါသေးတယ်. နောက်ရက် ဆက်ရေးပေးပါမယ်…
ဒီနေရာက ပို့စ်လေးကို အဆင်ပြေအောင် ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားပါတယ်.
ကိုရန်ရေ... မာတိကာထည့်ချင်တာ main includabe ကိုရန်ပြောတဲ့ ကို ရှာလို့မတွေ့ဘူး။ တွေ့ပြန်တော့လည်း error တဲ့ ကယ်ပါဦးနော်..ဟီး ဟီး
ဘယ်လို Error လဲဗျ. ဒီထဲမှာပဲ ပြန်ရေးပြပါဦး. Template ကို Edit မလုပ်ခင် Expand Widget Box လေးကို Tick လုပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော်. အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ. ထပ်ကြိုးစားကြည့်ပါဦးလေ...
ဟဲဟဲ ဆရာမတစ်ယောက်ထဲကို မာတိကာဆိုတာ လုပ်ပေးသွားမှန်းသိတယ်။ သိပ်ကြည်တာမဟုတ်ဘူး။။ ..ခုမှပဲ ဘလော့မှာရေးထားတယ် ဆိုတော့.. အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..ကိုရန်ကြီး ကောင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးအထူး...
အစ်ကို ရန်အောင်ရေ ညီမဆီမှာလေ Templete ဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူး Add apage element ဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူး မာတိကာလေးတွေလည်း ထည့်ချင်တာ အဲဒါတွေကိုမတွေ့တော့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ပြောပြပါဦးနော်..
Kaung Khant said...
XML error message: The character sequence "]]>" must not appear in content unless used to mark the end ofaCDATA section.
iblogger.org တွေအတွက်ရော ဘယ်လိုလုပ်ရမှလဲခင်ဗျာ...သိချင်ပါတယ်..
i almost got it but havealook for me and give me instruction. thanks
ကိုရန်ရယ်..ကူညီပါအုံး...ဗျာ.. ကျနော့်မှာ ကိုရန်ပြောသလိုမျိုး မာတိကာ အတွက် ကိုရန်ပေးထားတဲ့ ကုတ်ဒင်း တပိုဒ်လုံးကို main include ထဲကို ကူးပီးတော့ထည့်ပေး လိုက်ပါတယ်.. အဲဒါကြောင့် မာတိကာလည်း ပေါ်မလာဘူး ပီးတော့ .. “အပေါ်ဆုံး Title Header” ဆိုတဲ့ အပေါ်ဆုံး တပိုင်းလုံး ပျောက်သွားလို့ပါ.. ဘယ်လိုလုပ်ရင် ပြန်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြအုံး ကိုရန်ရယ်.. ကျနော် က rzone ပါ ကျနော့်ဘလော့ဂ် စာမျက်နှာတွေအတွက် ကိုရန်ရဲ့ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်တွေကိုဘဲ အားကိုးပီး လေ့လာနေရတာပါ.. ကူညီပါအုံးနော်.. ကျက အွန်လုံးမှာ အမြဲရှိနေပါတယ်..
ကိုရန်အောင်...ကူညီပါအုန်း၊ ဆိုက်မှာ နှင်းလေးတွေကျချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ